ताल र शैली एउटै स्वर पात्र फरक: जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
ताल र शैली एउटै स्वर पात्र फरक: जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम
प्रकाशित मिति ३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार २०:५३ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । सरकार गठन भएको वर्ष दिन पुगेको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम घोषणा गरे । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नागरिक विद्युत्को शेयरधनी’ भन्ने नारा दिइएको कार्यक्रमले सबै नेपालीलाई जलविद्युत आयोजनाको शेयरधनी बनाउने उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको दावी गरेका छन ।
प्रधानमन्त्रीले त उद्घाटनको क्रममा पहिलो शेयर आफैं किन्ने बताएका थिए । यसले यो योजनाप्रति सरकार कति उत्साहित छ भन्ने देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीले ‘पहिलो सेयर म किन्छु, दोस्रो कसले किन्छ भन्दै उत्साह देखाए ।
तर, यो योजना नयाँ भने होइन । यही मन्त्रालयले करिब तीन वर्ष अघि यस्तै योजना ल्याएको थियो । बिहीबार ठुलो तामझामका साथ उद्घाटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले यसलाई नितान्त नयाँ र ठूलो योजनाको रुपमा प्रस्तुत गरे ।
२०७३ साल भदौमा उर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दा यो योजनाको नाम ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ थियो । उद्देश्य पनि सबै नेपालीलाई जल विद्युत् आयोजनाको शेयर दिने भन्ने थियो । यस पटक नाममा ‘हरेक नागरिक विद्युत्को शेयरधनी’ भन्ने शब्दावली जोडिएको छ र त्यस्ता आयोजनाहरु किटान गरिएको छ । ‘फरक त्यती हो’, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भन्छन्, ‘अरु सबै नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भने जस्तै हो ।’
त्यसो त, पात्रमा पनि फरक देखिएको छ । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ योजना घोषणा गर्दा तत्कालन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जलविद्युत्को शेयर किन्न आह्वान गरेका थिए भने यसपटक वर्षमान पुनले ल्याएको योजनाको घोषणा प्रधानमन्त्रीबाटै भयो । समारोह पनि पहिले भन्दा भव्य भयो ।
शर्माको पालामा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता पनि आएको थियो । यसपटक वर्षमान पुनले ल्याएको योजनामा लगानी प्रतिवद्वता आउन बाँकी छ ।
मुलुकभर अझै केही दिन वर्षा
काठमाडाैं । अहिले मुलुकभर सरदर मनसुनी वर्षा भएको छ । चार महिनाको मनसुन अवधिमा देशभर सरदर करिब १५ सय…
शशांक, शेखर र सुजाताको संकल्पः कोइराला परिवारको विरासत फर्काउने अठोट
काठमाडौं । कांग्रेसमा कोइराला परिवारका तीन नेताले ‘विरासत’ फर्काउने उद्घोष गरेका छन्…
ब्राजिलद्वारा विश्वकप खेल्ने खेलाडीहरूको टिम घोषणा
लण्डन । आउँदो महिना सुरु हुने विश्वकप फुटबलका लागि उपाधिको दाबेदार मानिएको ब्राजिलले टिम घोषणा गरेको छ ।
उपचार गराएको खर्च तिर्न नसकेकका आमा–छोरा पूर्व संसद जमानी बसेर डिस्चार्ज, भट्टराई -‘अस्पतालमा पैसाको जमानी बसेको छु,’ थाहा छैन सरकारले कहिले दिन्छ ?’
चन्द्रपुर । बम विस्फोटमा घाइते भई उपचार गराएको खर्च तिर्न नसकेकका आमा–छोरालाई…
सुगरत्नको जंगे शासनले नेवानिका कर्मचारीहरुमा संत्रास
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगममा भए गरिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारको विवाद चर्किरहेको समयमा एमडी सुगतरत्न कंसाकार आफ्नै कर्मचारीहरुको…
२ सय ३५ किलो चरेससहित दुईजना पक्राउ
धादिङ । भारतीय कन्टेनरमा लुकाई छिपाई लैजान लागेको २ सय ३५ किलो चरेससहित दुईजनालाई प्रहरीले गजुरीबाट पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौं क्षेत्र नं १ का प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठको भिडियो सर्वाजनिक, काठमाडौंका जनताले खानेपानी पाएन ?
अमेरिकीहरूलाई आउँदा कठिन दिनका लागि तयार रहन ट्रम्पको आग्रह
अब एसईई विद्यार्थीका लागि नयाँ सुविधा
दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै ठूलो चुनौती कोरोना : राष्ट्रसंघ
चीनमा भन्दा अमेरिकामा धेरै मानिसको कोरोनाबाट मृत्यु
‘खानेपानी सहज वितरणको लागि भिडियो बैठक’ 373 views
अब एसईई विद्यार्थीका लागि नयाँ सुविधा 41 views
मृत्‍युको सपना, मलामी, शँख र आर्यघाट ! 24 views
कोरोनाभाइरस: कोभिड-१९ को कारक विषाणु र यौनबारे तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा 22 views
चीनमा भन्दा अमेरिकामा धेरै मानिसको कोरोनाबाट मृत्यु 21 views
काठमाडौं क्षेत्र नं १ का प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठको भिडियो सर्वाजनिक, काठमाडौंका जनताले खानेपानी पाएन ? 20 views
केटा मान्छेले सेक्स सम्बन्धको बेलामा गर्ने ५ गल्ति 17 views
अमेरिकीहरूलाई आउँदा कठिन दिनका लागि तयार रहन ट्रम्पको आग्रह 11 views